Ingaphakathi Lendlu Indlu yesitayile sokwenziwa kwezixhobo ezifudumeleyo. Le ndlu ilungiselela imisebenzi eliqela yabathengi ukukhuthaza iimpawu zobomi. Umyili wazama ukudibanisa imibhobho kwindawo nganye kunye nokudibanisa iiplanga, intsimbi kunye ne-ENT ukubonisa ibali lobomi babathengi. Ayifani nesitayile esiqhelekileyo sokwenziwa kwemizi-mveliso, le ndlu ingenisa imibala embalwa kwaye ilungiselela iindawo ezininzi zokugcina.
Isitulo Isitulo se-Ydin sinokuxhonywa nguwe, ngaphandle kokusebenzisa izixhobo ezizodwa, ngenxa yenkqubo elula yokunxibelelana. Iinyawo ezi-4 ezifanayo azibekwa ngokulandelelana kwaye isitulo sekhonkrithi, esisebenza njengelitye lesiseko, sigcina yonke into isendaweni. Iinyawo zenziwa ngeenkuni ezilahliweyo ezivela kumenzi wamanqanaba, zilungiselelwe ngokulula kusetyenziswa iindlela zokwenza umsebenzi wamaplanga kwaye ekugqibeleni zenziwe ioyile. Isihlalo sibunjiwe nje kwikhonkrithi ye-UHP ehlala ixesha elide. Zisi-5 kuphela iindawo ezingahambelaniyo ukuba zipakishwe kwaye zilungele ukuthunyelwa kubathengi bokugqibela, yenye ingxabano yokuzinza.
Icholley Yoshizi Etyisiweyo
Icholley Yoshizi Etyisiweyo UPatrick Sarran wayila i-Coq ushizi wetrolley ngo-2012. Into engaqhelekanga yale nto iqengqelekayo idlulisa umdla wenkcitho ye-diners, kodwa ungenzi mpazamo, esi sisixhobo esisebenzayo. Oku kufezekiswa ngokwenziwa kohlobo lwe-beech olu-vylised olufakelweyo luqiniswe yibhantshi yecylindrical red lacquered enokubotshwa ecaleni ukuze ibonakalise ulwazelelo lweshizi evuthiweyo. Usebenzisa isibambo ukuhambisa inqwelo, ukuvula ibhokisi, ukutyibilika ebhodini ukuze enze indawo yeplate, ujikeleze le disc ukusika iinxalenye zeshizi, umlindi unokukhulisa inkqubo ibe sisiqwenga esincinci sobugcisa.
I-Trolley Yentlango Ehlaziyiweyo
I-Trolley Yentlango Ehlaziyiweyo Lo mboniso wefowuni yokuhambisa iidizili kwindawo yokutyela wadalwa ngo-2016 kwaye sisiqwenga esitsha kuluhlu lwe-K. Uyilo lwe-Sweet-Kit luhlangabezana neemfuno zokuqaqamba, ukulenza lula, ivolumu kunye nokubonakala. Umatshini wokuvula usekwe kwindandatho ejikeleza i-disc yeglasi ye-acrylic. Amakhonkco amabini e-beech abunjiweyo ziitrekhi zokujikeleza nokuba ziindawo ekubambeni kuzo ukuvula icala lokubonisa kunye nokuhambisa itroli kwindawo yokutyela. Ezi zinto zidibeneyo zinceda ukuseta indawo yenkonzo kunye nokuqaqambisa iimveliso ezibonisiweyo.
Inkonzo Yesiselo Eshushu Ngesityalo Esitsha
Inkonzo Yesiselo Eshushu Ngesityalo Esitsha UPatrick Sarran wenza i-Herbal Tea Garden njengempahla eyahlukileyo ye-Landmark Mandarin Oriental yaseHong Kong ngo-2014. Umphathi wokutya wacela itroli apho anokwenza khona umnyhadala weti. Olu luyilo lusebenzisa kwakhona iikhowudi eziphuhliswe nguPatrick Sarran kwi-trolleys yakhe ye-K, kubandakanya itrolley ye-KEZA yecolor kunye netrmley yokusebenza ye-Km31, echukunyiswe ngumzobo womhlaba waseTshayina.
I-Champagne Trolley I-BOQ yitroli yokuhlamba umkhenkce ngokukhwela i-champagne kwii-receptions. Yenziwe ngeenkuni, isinyithi, i-resin kunye neglasi. Ulungelelwaniso lwesangqa lucwangcisa izinto kunye nezixhobo njengenxalenye ebalulekileyo yoyilo. Imibhobho esemgangathweni igxunyekwe kwi-corolla, entloko phantsi, phantsi kwetreyi emhlophe ekhuselweyo, ekhuselweyo eluthulini nakothuso. Ukuqulunqwa kwayo, okuphantse kukuntywila, kumema iindwendwe ukuba zenze isangqa ukunambitha isiselo esinexabiso. Kodwa okokuqala, yinto efanelekileyo yokufikelela kwisikhangeli.
Poise Isibane Setafile Esinokuhlengahlengiswa Tuesday 5 July
Memento Ileta Evulekileyo Monday 4 July
Exxeo Ipiyano Ye-Hybrid Egudileyo Sunday 3 July
Ingaphakathi Lendlu Isitulo Icholley Yoshizi Etyisiweyo I-Trolley Yentlango Ehlaziyiweyo Inkonzo Yesiselo Eshushu Ngesityalo Esitsha I-Champagne Trolley